Izici zedolobha lesimanje ngekhulu lama-XNUMX | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Adriana | | Amandla avuselelekayo, Imvelo
I-Las imizi Yiziza eziba nezinguquko ngokuya ngezinqubo ezahlukahlukene ezenzeka kuzo, indlela umphakathi wazo ohlelwe ngayo futhi ngokuhamba kwesikhathi.
¿Unjani umuzi wanamuhla? Yiziphi izidingo okufanele ngabe unazo ukwanelisa izidingo zabasebenzisi futhi ube nobungane nemvelo? Ake sikubone ngokulandelayo:
Izici zedolobha lesimanje ngekhulu lama-XNUMX
Namuhla kunokuthambekela okuthile kokuvuselela amadolobha, kepha ukufeza le njongo, kufanele kubhekwe izici ezithile ezibalulekile ezihlukanisa idolobha. idolobha lesimanje kokunye okubuyela emuva njenge:
Buyekeza futhi uma kunesidingo shintsha indlela yokuhlelwa nokusetshenziswa kwensimu yamadolobha.
Nweba izinsizakalo zomphakathi kuwo wonke umphakathi njengamanzi okuphuza, insizakalo yendle, ugesi, i-intanethi, igesi, phakathi kokunye.
Nyusa i- izakhiwo zemvelo ezakhiweni ezintsha noma amakhaya kanye nezinguquko noma ukubuyisela ezindala ukuzenza zisimame kakhulu.
I-matrix yamandla kufanele ihlelwe ngokususelwa amandla avuselelekayo futhi lokho kwehlukile. Ngaphezu kokukhuthaza ukusetshenziswa kwe- amandla ahlanzekile zombili ngesimo sasekhaya kodwa futhi nasekusetshenzisweni kwezimboni.
Ukulondolozwa kwezikhala eziluhlaza kufanele kukhuthazwe futhi kwandiswe ukwandiswa kwazo uma kuyindlala.
Tshala imali futhi wakhe amasu woku ukuhamba okusimeme emadolobheni nokukhuthaza nokuthuthukisa ezokuthutha zomphakathi, amabhayisikili nezinye izindlela zemvelo.
Beka phambili ukusetshenziswa kobuchwepheshe obuluhlaza nobonga amandla.
Thuthukisa ukonga ugesi kanye nokusetshenziswa okunengqondo kwamandla kuzo zonke izindawo ezisemadolobheni.
Fundisa ngezindaba zemvelo ngemfundo ehlelekile nengakahleleki yokuthi ungayinakekela kanjani imvelo nokuthi imaphi amaphethini okusetshenziswa okufanele aguqulwe.
Thuthukisa izinhlelo eziqhubekayo ze buyisela kabusha yazo zonke izinhlobo zezinto zokwakha.
Yenza izenzo nezinqubomgomo ezinciphisa ukungalingani emphakathini kanye nobuphofu.
Lezi yizici eziyinhloko okufanele uzicabangele ukufeza i- idolobha lesimanje lekhulu lama-XNUMX.
Maningi amadolobha alwela ukuwufinyelela, kepha amanye asemuva kakhulu, okudinga isinqumo esikhulu sezepolitiki kanye nengcindezi evela kuzakhamizi ukuze zikufinyelele.
Kuyinselele impela uguqule i-nucleus yasemadolobheni ibe idolobha lesimanje ngezimo zokuphila ezihloniphekile zabantu ezivikela imvelo futhi zigcine izinsiza zayo ezizukulwaneni ezizayo.
Ungangeza amanye amaphuzu ohlwini lwezici okufanele idolobha lanamuhla libe nazo?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Idolobha lanamuhla
Amandla wamalahle nemiphumela yawo njengomthombo wamandla
URajoy umemezela indali entsha evuselelekayo nge-3.000 MW